धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी शेयर गरी हेर्नुहोस - Bihani Nepal
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी शेयर गरी हेर्नुहोस
यदि कसैले सपनामा दियो बालेको या कसैलाई पैसा सापटी दिएको देख्यो भने उसलाई अनपेक्षित रुपमा धनप्राप्ति हुन सक्छ । यदी सपनामा कसैलाई गर्धन चिलायो भने पनि धन लाभ हुने सम्भावना हुन्छ । साथै बोटमा पाकेको सुन्तला या खेतमा पाकेको गहुँ देख्यो भने उसलाई छिट्टै धन प्राप्ति हुने सम्भावना हुन्छ ।
जब कुकुरले अचानक जमीनमा पटक पटक टाउको रगडेको देख्नु भयो भने त्यस्तो ठाउँमा गाडेको धन हुन सक्छ । साथै यदी कुकुरले कुनै खाद्यपदार्थ लिएर आएको देख्नु भयो भने पनि तपाईलाई धन प्राप्त हुन सक्छ।
जो व्यक्ति सपनामा फलफुल खाएको देख्छ उसले धन लाभ हुने योग बन्छ। सपनामा धुम्रपान गर्छ,उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ । सपनामा जसको दाहिने हातमा सेतो रँगको सर्पले टोक्छ उसलाई धेरै धन प्राप्ति हुन सक्छ ।
सपनामा हरियो फुलबारी तथा अनार र उँट देखियो भने धन प्राप्ती हुने योग बन्छ।कहिँ जाँदै गरेको अवस्थामा यदि बाटोमा सुन्दर महिला या कन्या देखियो भने त्यसलाई धनप्राप्तीको संकेत मान्न सकिन्छ ।
यदि कोही सपनामा टाउको कन्याउँदै गरेको देखियो भने त्यसकै कारण पैसा मिल्न सक्छ । यदी आँखा कन्याउँदै गरेको देखे भने पनि पैसा मिल्न सक्छ । सपनामा गाडेको धन देखियो भने पनि सम्पत्ति वृद्धि हुन सक्ने मान्यता रहेको छ।
Previous मानिसले चिताएको सबै पूरा गरिदिने दक्षिणकाली भगवती मन्दिर लाइ छोएर दर्शन गरि शेयर गरौ !
Next जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर एक पटक अवस्य पढ्नुहोला !
जनकपुरको लागि निस्केको हवाईजहाज पोखरा पुगेपछि।।।